भरतपुरमा कांग्रेसका बागी जगन्नाथको रफ्तारले एमालेलाई ठूलो राहत, यस्तो आकलन बाहिरिएपछि गठबन्धन उम्मेदवार रेणु ठूलो तनावमा ! | Prahar News
भरतपुरमा कांग्रेसका बागी जगन्नाथको रफ्तारले एमालेलाई ठूलो राहत, यस्तो आकलन बाहिरिएपछि गठबन्धन उम्मेदवार रेणु ठूलो तनावमा !
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कहिले नेकपा एमाले त कहिले गठबन्धन उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् । अहिलेसम्म अर्थात यो समाचार तयार पार्दासम्म ४ सय ५० मत गणना गर्दा एमालेका विजय सुवेदी र गठबन्धन उम्मेवार रेणु दाहालले बराबर मत प्राप्त गरेका हुन् ।
सुवेदीले १६७ मत ल्याउँदा दाहालले पनि १६७ मत ल्याइन् । यस्तै, उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले १६२ मत ल्याएका छन् भने राप्रपाकी हिमला गुरुङले ९१ मत ल्याइन् । वडा नं १ मा वडाध्यक्षका एमाले उम्मेदवार शुक्र श्रेष्ठले १६० र कांग्रेसका केशव महर्जनले १८१ मत ल्याएका छन् ।
कांग्रेसबाट विद्रोह गरी बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले ५१ मत ल्याएका छन्। पौडेलले यही रफ्तारमा मत पाइरहेमा सत्ता गठबन्धनको कम्तीमा पनि १२ प्रतिशत मत काट्ने आकलन गरिएको छ। यदि त्यति मत जगन्नाथले काटे नतिजा एमालेको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अहिले त्यहाँ वडा १ नम्बरको मतगणना भइरहेको छ। मतगणना धेरै ढिलाइ भइरहेको गणनास्थलमा खटिएका एकजना प्रतिनिधिले बताएका छन्। गणना सुरु भएको चार घण्टामा केबल २ सय मत मात्रै गन्न सम्भव भएको छ।
अहिले त्यहाँ वडा १ नम्बरको मतगणना भइरहेको छ। मतगणना धेरै ढिलाइ भइरहेको गणनास्थलमा खटिएका एकजना प्रतिनिधिले बताएका छन्। गणना सुरु भएको चार घण्टामा केबल ४ सय ५० मत मात्रै गन्न सम्भव भएको छ।